Mesolimbic Dopamine စနစ်အတွင်းရှိအချိုမှုန့်လက်ခံသူများသည်အရက်သောက်ခြင်းအားလျော့ကျစေသည့်အပြုအမူ (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
အဆိုပါ Mesolimbic Dopamine System ကိုဖျန်ဖြေအရက် Relapse အပြုအမူအတွင်းအချိုမှု receptor (2015)
J ကို neuroscience ။ 2015 နိုဝင်ဘာ 25; 35 (47):15523-38. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2970-15.2015.
Eisenhardt M က1, Leixner S က1, Luján R ကို2, Spanagel R ကို3, ဘေလ်ဘောင်တစ်ဦးက4.
အဆိုပါ mesolimbic dopamine (DA) လမ်းကြောင်းအတွင်း Glutamatergic input ကိုစွဲလမ်းအပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒီရေတွင်းအလွဲသုံးစားမှုအချို့ဆေးဝါးများသည်မြဲမြံသည်ဖြစ်သော်လည်းထိုသို့ mesolimbic သည့်စနစ်အတွင်းအချိုမှု receptors နာတာရှည်အရက်သုံးစွဲခြင်း၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများဖြန်ဖြေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ရှိမရှိမသိရသည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့် DA Transporter (DAT) သို့မဟုတ် D1R-ဖော်ပြအာရုံခံဖြစ်စေထဲမှာအချိုမှု receptor ဗီဇ Grin1 သို့မဟုတ် Gria1 ချို့တဲ့လေးသွေးဆောင် Mutant mouse ကိုလိုင်းများကို အသုံးပြု. relapse အပြုအမူအားဖြင့်သွေးဆောင်အရက်-ရှာကြံတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေအတွက် mesolimbic NMDARs နှင့် AMPARs များ၏အလှူငွေအကဲဖြတ်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး colocalization လေ့လာမှုများကြောင့် Mutant mouse ကိုလိုင်းများအတွက် DAT- သို့မဟုတ် D1R-ဖော်ပြအာရုံခံဖြစ်စေများတွင် GluN1 သို့မဟုတ် GluA1 ၏မရှိခြင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက် context- ပေါင်းအရက်-ရှာကြံအပြုအမူ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement မသက်ရောက်မှုရှိခြင်းစဉ်ကဤအာရုံခံ subpopulations အတွင်း GluN1 နှင့် GluA1 အဲဒီ receptor subunits, ထိုအရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေကဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်နျူကလိယ accumbens နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်၏ ventral tegmental ဧရိယာသို့ NMDAR ရန် memantine ၏ပြုတ်ရည်များနှင့် aniracetam သုံးပြီး AMPAR လှုပ်ရှားမှု pharmacological အလားအလာမှတဆင့် Mutant phenotype တစ်ကယ်ဆယ်ရေးပြီးနောက်အရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအလားတူလျှော့ချသရုပ်ပြ pharmacologically သည်ဤရလဒ်များကိုအတည်ပြု။ ငါဎနိဂုံးချုပ်, dopamine အာရုံခံအဖြစ် NMDARs နှင့် AMPARs မှတဆင့်အလတ်စား spiny အာရုံခံနှင့်၎င်းတို့၏ glutamatergic သွင်းအားစု D1R-ဖော်ပြ relapse တုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်။ ဤရလဒ်သည် relapse အပြုအမူများအတွက် neuroanatomical နှင့်မော်လီကျူးအလွှာများကို relapse အပြုအမူပြောင်းလဲပစ်အတွက် glutamatergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး။
ဤတွင်ကျနော်တို့က mesolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်းအချိုမှု receptors အရက် relapse အတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍကြောင့်မျိုးရိုးဗီဇနှင့် pharmacological သက်သေအထောက်အထားသည်။ အမျိုးမျိုးသောသွေးဆောင်နှင့် site-specific ကို Transgene mouse ကိုမော်ဒယ်များနှင့် pharmacological validation ကိုစမ်းသပ်ချက်အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ NMDARs နှင့် AMPARs ဝေဖန် subunits D1 ပါဝင်သောအာရုံခံ (ထိုအရက်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အတွက်တိုးလာသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ dopamine အာရုံခံတွင်သို့မဟုတ် dopamine အဲဒီ receptor အတွက်ဖြစ်စေထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းပြသ abstinence တဲ့ကာလပြီးနောက်အရက်စားသုံးမှု) အရက်-ရှာကြံတုံ့ပြန်မှု၏ context- ပေါင်း cue-သွေးဆောင် reinstatement မသက်ရောက်မှုရှိခြင်းနေစဉ်။ ထိုအချိုမှု receptors ၏ရွေးချယ် inactivation အားဖြင့် glutamatergic neurotransmission ပစ်မှတ်ထားဆေးကုထုံးထိရောက်မှုရှိပေလိမ့်မည်။